EDO: fandrefesana ny fandraisan'anjaran'ny mpanjifa amin'ny doka amin'ny TV | Martech Zone
EDO: fandrefesana ny fandraisan'anjaran'ny mpanjifa amin'ny doka amin'ny fahitalavitra
Alarobia, Aprily 8, 2020 Alarobia, Aprily 8, 2020 Douglas Karr
Rehefa miresaka momba ny dokambarotra niomerika ny olona, ​​dia matetika no nesoriny ireo fantsom-pahitalavitra nentim-paharazana toy ny fahitalavitra sy radio. Fa ny orinasan-tserasera omaly dia tsy rariny intsony Broadcasting… Azon'izy ireo ny metrika fampiroboroboana sy ny fampiasana hatramin'ny faharoa. Ny fifandraisana rehetra ataonao amin'ny lavitra anao dia voarakitra mba hanatsarana tsara ny fandaharana sy ny dokam-barotra kendrena. Ny tombony taloha tamin'ny serivisy streaming ankehitriny dia tafiditra ao amin'ny doka fahita amin'ny fahita lavitra amin'ny fahitalavitra.
Fomba iray tsara kokoa hisamborana ny fikasana hividy dia ny fampifanarahana ireo dokambarotra amin'ny fahitalavitra amin'ny efijery faharoa fikarohana biolojika. Mpanjifa mijery dokambarotra ary avy eo dia mikaroka ilay entana amin'ny findainy na tablety. Orinasa iray mitarika ny fampifanarahana ireo fifanakalozana ireo Edo. Ny mpividy sy ny mpivarotra doka amin'ny fahitalavitra dia miankina amin'ny angon-drakitra handrefesany ny fahaizan'ny fahitalavitra nasionaly mitaona ny mpanjifa hiditra amin'ny fividianana marketing sy fividianana. Voaporofon'izy ireo hatrany hatrany fa misy ny fifandraisan'ny mpanjifa fikasana hividy. Antsoin'izy ireo ny teknolojia Search Engagement.
Inona no atao hoe Fikarohana?
Search Engagement dia mitranga rehefa miova ny mpanjifa a mpandray passive hafatra momba an mpandray anjara mavitrika amin'ny fizotry ny fividianana amin'ny alàlan'ny fikarohana an-tserasera ny fanoloran'ny dokam-barotra. Amin'ny alàlan'ny fampifanarahana tsara ny fandefasana doka amin'ny hetsika fikarohana, ny EDO dia manampy ny dokambarotra hitarika amin'ny fomba mandaitra ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fantsom-barotra hatrany amin'ny fifanakalozana.
Fikarohana momba ny fikarohana: Ny fotoana maha-marina
Ny fomba fiasan'ny doka amin'ny fahitalavitra:
EDO dia mandrefy ny Engagement Search an'ny mpanjifa manerana ny marika sy vokatra lehibe, misambotra angona granular ampy hanomezana mazava tsara ny fandraisan'anjaran'ny mpanjifa amin'ny fandefasana doka fahita manokana.
Saripika amin'ny fandaharana fandefasana doka ara-tantara (TV Ad Database) ny ekipan'ny siansa data-dry zareo dia mamolavola teknika statistika izay manokatra hevi-dàlana manan-danja ho an'ireo mpividy sy mpivarotra doka.
Ireo mpanjifa dia mampiasa ireo fomba fijery ireo handrefesana ny zava-bitan'ny famoronana, ny haino aman-jery amin'ny fahitalavitra, ny fampielezana fahitalavitra ary ny ezaky ny mpifaninana aminy.
Miasa amin'ny mpanjifa ny manam-pahaizana EDO hamotopotorana fanontaniana saro-pantarina hanatsarana sy hanatsarana ny fampielezan-kevitra amin'ny hoavy amin'ny alàlan'ny fanokananana ireo toetoetran'ny fahitalavitra mahomby indrindra amin'ny fitarihana Search Engagement.
Mampifanaraka ny dokam-barotra amin'ny televiziona i EDO ary mampifanaraka azy amin'ny angon-drakitra fikarohana 24/7 nefa tsy mila fanadihadiana alohan'ny fampielezan-kevitra mialoha / aorian'ny. Miaraka amin'ny EDO, ny orinasa dia afaka:
Diniho ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitry ny TV - Fantaro ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitrao raha ampitahaina amin'ny fanentanana taloha, ary raha mahazo ampahany ampy amin'ny Search Engagement ianao. Fatrao ny zava-bitan'ny doka nataonao tamina hetsika mivantana sy fampifangaroana narosonao.
Manatsara ny famoronana amin'ny fotoana tena izy - Manaova fitsapana mivantana ny A / B amin'ny fahaizanao amin'ny fahitalavitra tsy misy asa na fiomanana fanampiny. Tombano ny fandraisan'anjaran'ny mpanjifa isaky ny fomba fiasa, avy eo manatsara ny drafitra famoronana sy fihodinanao.
Fantaro hoe aiza ny media anao no mitarika ny firotsahana marika - Zero amin'ny tambajotram-pifandraisana, fampisehoana, na sidina andro izay mitondra ny fifandraisan'ny marika lehibe indrindra, avy eo ampirimaro ny angon-drakitra hanambarana ROI.
Benchmark manohitra ny fampielezan-kevitr'ireo mpifaninana - Fantaro hoe aiza no misy ny fampielezan-kevitry ny hafa hahafahanao mifaninana amin'ny fomba mahomby kokoa. Syndicated tanteraka ny angona EDO ary tsy mila fampahalalana momba ny mpanjifa tsy miankina.
Tsindrio ny manam-pahaizana EDO raha mila fikarohana lalina kokoa - Ny ekipan'izy ireo dia hanampy anao hanokana sy hamakafaka ny lanjan'ilay sanda amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra samihafa. Fantaro ny fiantraikan'ny safidy ataonao toy ny endrika doka, faharetan'ny doka, fizarana manokana, na fampidirana ary fametrahana ao anatin'ny sehatry ny varotra.
Mangataha Demo Demo
Tags: dokam-barotrafikasana hividyfahitalavitradokam-barotra amin'ny fahitalavitra
Atombohy ny automatisation marketing ho an'ny fianaranao an-tserasera hahazoana ny varotra B2B bebe kokoa